Inona no atao hoe serif typeface ary oviana no ampiasaina? | Famoronana an-tserasera
Ny mpamorona sary dia matihanina izay manome lanja lehibe ny safidin'ny endritsoratra, satria matetika izy io no fototry ny famolavolana. Ny fisafidianana ny endri-tsoratra mety ho an'ny endrika tsirairay dia matetika manampy amin'ny fanavahana ny endrika mahazatra sy ny matihanina. Ny typography koa dia manampy amin'ny fampitana fihetseham-po samihafa. Misy sokajy typografika samihafa, ny malaza indrindra dia: Serif, Sans Serif, Sora-tanana ary Haingo.
Ireo vondrona endri-tsoratra ireo dia manana toetra samihafa mifototra amin'ny endriky ny endri-tsoratra, ny habeny, ny lanjany ary ny tahan'ny endri-tsoratra. Miankina amin'ny endritsoratra hampiasainao dia hampita fihetseham-po iray na hafa ianao. TSARA typography ary raha ny marina, io no rafitra ivon'ny famolavolana. Amin'ity lahatsoratra anio ity dia hanazava sy hampahafantatra ny endri-tsoratra serif isika ary rehefa ilaina ny mampiasa azy ireo.
1 Inona no atao hoe serif typeface?
2 Fomba endri-tsoratra serif
3 Rahoviana ny fampiasana serif typeface
Inona no atao hoe serif typeface?
Ny endri-tsoratra serif dia iray misy serif na terminal, izany hoe tsipiriany kely eo amin’ny faran’ny kapoka taratasy. Ity karazana typography ity dia manana toetra matotra sy mahazatra. Raha ny niaviany, araka ny teoria fahiny, rehefa mampiasa fitaovana toy ny borosy na penina, dia namela "famantarana" ny mpanora-dalàna isaky ny faran'ny kapoka. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanjary kanto kokoa ireo kapoka ireo ary lasa ampahany manan-danja amin'ity karazana endri-tsoratra ity. Misy karazana endri-tsoratra isan-karazany ao anatin'ity fomba ity toy ny romana taloha, romana maoderina, slab ary egyptiana.
Ny sasany amin'ireo endritsoratra serif malaza indrindra dia: Boky Antiqua, Courier, Courier New, Century Schoolbook, Garamond, Georgia, Times, Times New Roman, na Palatino.
Fomba endri-tsoratra serif
Ny fanasokajiana ny serif typefaces dia nofaritan'i Francis Thibodeau. Izy io dia mifototra amin'ny rohy napetraka eo amin'ny serif sy ny tandroka. Miorina amin'izany, dia namaritra ireto fomba manaraka ireto izy:
Romanina fahiny: saika tsy misy mahasamihafa ny antler sy ny serif. Ny rohy asehon'izy ireo dia boribory. Matsilo ny famaranana azy ary malalaka ny fotony. Miovaova ny kapoka, ary manify miakatra sy midina matevina. Raha ny fizotry ny axe, dia oblique ny hateviny ary midadasika ny habaka soratra. Amin'ity vondrona ity dia azo ampidirina: Garamond sy Caslon.
Romanina Tetezamita: ny fahasamihafana misy eo amin'ny hatevin'ny tandroka sy ny serif dia manomboka misongadina, ny fifandraisana misy azy ireo dia boribory. Ny serif dia manana fiafarana maranitra kokoa noho ny teo aloha. Ny kapoka dia miovaova ihany koa, fa kosa, ny fahasamihafana misy eo amin'ny manify sy ny matevina dia miharihary kokoa. Ny fizotry ny axe manify dia mitsivalana kokoa noho ny oblique. Ny sasany amin'ireo endri-tsoratra romana tetezamita dia; Baskerville, Times na Century.
Romana maoderina: Amin'ity fomba ity dia mibaribary kokoa ny fahasamihafana misy eo amin'ny tandroka sy ny serif, miaraka amin'ny fifandraisana mahitsy satria ny serif amin'ny litera dia linear. Ny kapoka dia miovaova kokoa noho ny amin'ny romana tetezamita. Azontsika raisina ho Romanina maoderina ny Bodoni, ny Caxton, ny New Baskerville ary ny Didi.
Egyptiana: ny sandan'ny tandroka sy ny serif dia mirehitra ary manana rohy boribory. Ny serif dia matevina toy ny tehina. Miankina amin'ny endri-tsoratra, mety ho efajoro izy io, toy ny Robotik, na boribory, toa an'i Cooper Black. Mazàna mitsivalana ny lalan'ny axis amin'ny fanatevenana.
Rahoviana ny fampiasana serif typeface
Betsaka ny fampiasana azonao omena an'io karazana endri-tsoratra io, miankina amin'ny estetika sy ny fiasa tianao homena azy. Tsara lNy endri-tsoratra serif koa dia manana sanda miasa amin'ny lahatsoratra, araka ny efa nolazaiko teo aloha, izy ireo no mety indrindra amin'ny lahatsoratra lava sy kely. Hitantsika amin'ny gazety vita pirinty ny ankamaroany. Raha tianao ny hampita ny fomban-drazana, ny klasikisma, ny hakantony na ny fahamatorana, ny endri-tsoratra serif no endri-tsoratra mety indrindra.
Ireto ny sasany amin'ireo lafin-javatra tsy maintsy raisinao rehefa misafidy karazana endritsoratra iray na hafa:
Halavan'ny soratra: Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny endri-tsoratra serif dia mety amin'ny fampiasana lahatsoratra amin'ny habe kely ary manana fanitarana lahatsoratra lava. Azo antoka fa raha mamaky boky ianao amin'izao fotoana izao dia serif ny endri-tsoratra misy azy.
Public: Ny endri-tsoratra dia mampita fihetseham-po, noho izany dia tsy izy rehetra dia mikendry mpihaino iray. Tahaka ny maha zava-dehibe ny loko, ny endriky ny endritsoratra dia hanampy amin'ny famaritana ny tanjonao. Amin'ny ankapobeny, ity fomba fanoratana ity dia ampiasaina amin'ny orinasa matotra sy ara-dalàna, toy ny mpisolovava. Na dia ampiasaina amin'ny sehatra be pitsiny kokoa aza izy ireo, toy ny hatsaran-tarehy raitra, lamaody na marika fiara.
fanohanana: Ny endrika ampiasaina indrindra dia ny haino aman-jery vita pirinty misy lahatsoratra lava. Toy izany koa no mitranga amin'ny haino aman-jery an-tserasera toy ny bilaogy na lahatsoratra.
Fisarahana: ny elanelana misy eo amin'ny litera koa dia zava-dehibe, ny endri-tsoratra izay tena condensed dia tsy soso-kevitra hovakiana, zavatra tokony hodinihinao izany.
Layout: Miankina amin'ny fisehon'ireo lahatsoratra, indraindray dia mahaliana ny manambatra ny endritsoratra serif amin'ny endritsoratra san serif, mba hamoronana fifanoherana ary ny lahatsoratra dia tsy mirindra loatra.
Ity misy rohy mankany amin'ny lahatsoratra hafa momba ny ny endri-tsoratra serif be mpampiasa indrindra. Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hianatra bebe kokoa momba ny endri-tsoratra serif, ny fomba fiasany, ary ny fotoana hahafantarana ny fampiasana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inona no atao hoe serif typeface ary oviana no ampiasaina?
Mahasoa ve ny mividy mpanaraka ao amin'ny Instagram?